19 / 02 / 2018 19 / 02 / 2018 ဂရေဟမ် 1190 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71021 စီးရီး 18, 75208 Yoda ၏တဲ, ၇၆၃၈၆ Hogwartဂရိတ်ခန်းမ, 76105 The Hulkbuster: Ultron Edition ကို, Avengers, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, စုဆောင်းထားသောအသေးစားစီးရီး 18, Jurassic World, Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Jurassic World, Lego Star Wars, Marvel, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, နယူးယောက်ကစားပွဲ, Star Wars, ကစားစရာတရားမျှတသော, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
Toy Fair ရာသီနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှဘာလုပ်ခဲ့သနည်း Lego နယူးယောက်ရှိ Group ၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောမီဒီယာကအုတ်ပရိသတ်များအားဖော်ပြသနည်း။
အဆိုပါ Lego ယခုနှစ် Toy Fair ပွဲတော်၌လန်ဒန်၊ နူရမ်ဘာ့ဂ်နှင့်နယူးယောက်တို့တွင်အုပ်စု၏တည်ရှိမှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကထက်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ လန်ဒန်မှာ Lego အုပ်စုမဖွင့်ခဲ့ပါ Nuremberg တွင်မီဒီယာသည်လက်တဆုပ်စာအနည်းငယ် မှလွဲ၍ အသစ်သောအရာများကိုဓာတ်ပုံရိုက်။ မရပါ။ နယူးယောက်၌အသစ်တစ်ခုရွေးချယ်ရေး Lego အစုံမီဒီယာဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အဘို့အရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာများသောအားဖြင့်နွေရာသီအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပါးလွှာသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ သို့သော်နယူးယောက်ခ်အရောင်းအဝယ်ပြပွဲတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်ငါးချက်မှာသေချာပါသည်။
၂ Lego Jurassic World ဆောင်ပုဒ်ကdéjà vu ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမပေးပါဘူး
ထက်သာ။ ကောင်း၏ဘာမျှရှိပါတယ် မှားဖြစ်ထွက်လှည့် ဒီနှစ်ရဲ့တူသောအခါချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်ပုဒ် Jurassic Worldဖြေ - ပြိုလဲကျသွားတဲ့နိုင်ငံတော်။ အဆိုပါ Juniors အစုံလျစ်လျူရှု, ဒီမူရင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြေပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းသောကောင်းတဲ့, တင်းကျပ်စွာနှင့်မတူညီတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ် Jurassic World မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဤကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်သည်လေးလံသောယာဉ်များအမြဲလိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဒိုင်နိုဆောဝင်း၊ ပျက်စီးသောဆွဲဆောင်မှုနှင့်တိုင်းပြည်အိမ်လည်းရှိသည်။ အသစ် Carnotaurus နှင့် Stygimoloch နှစ် ဦး စလုံးလွန်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြည့်ရှုပါ။
2. ဟယ်ရီပေါ်တာ နောက်ကျောအုတ်၌တည်ရှိ၏
တစ်ခါတစ်ရံကောလဟာလအချို့ကိုတရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် New York Toy Fair တွင်ပြသရန်မလွယ်ကူပါ Lego နောက်ဆုံးတွင်အုပ်စုသည်ပရိသတ်များအား Wizarding World ၏အသစ်တစ်ခုကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ။ 75904 Hogwarts Great Hall သည်အရေးကြီးသောတည်နေရာအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hogw တစ်ခုလုံးကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းထက်စုဆောင်းသူများအားကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။artလိုချင်ပါတယ် မျှော်လင့်ကရှည်လျားသောမတိုင်မီဖြစ်လိမ့်မည် Lego Group မှအစုံ၏ကျန်နှင့်ဖော်ပြသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
3 ။ အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည် Stark စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မမီနိုင်ပါ
76105 The Hulkbuster: Ultron Edition သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကြည့်ကောင်းသည့်အပြင်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်လှပသောမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအထူးသီးသန့်စက်ဟာပေါင် ၂၅၀ မှ ၃၅၀ ကြားရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်သာစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Avengers မှမဟုတ်ပြည်တွင်းစစ်၊ ယခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ခြင်းမဟုတ်၊ ၂၀၁၄ Avengers: Age of Ultron ။ ဘာမှမရှိဘူး partဂိမ်း၏ပရိတ်သတ်များအတွက်ကြောင့်မှားယွင်းတဲ့, ကလက်ရှိနှင့်အတူ calter ထဲကရုံအထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Marvel လွှတ်ပေး။
4 ။ : Partအဘို့အ y ကအချိန် စုဆောင်းထားသောအသေးစား
အဘယ်အရာကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာအထူးလိုင်စင်ရစီးရီးများစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်ပုံမှန်စီးရီးများကိုသူတို့လှည့်ပတ်သွားသောအခါ ပို၍ ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းစေသည်။ Series 18 သည်ဇာတ်ကောင်များအနှစ် ၄၀ ကိုကျင်းပသောအယူအဆအပေါ်အခြေခံသည် Lego ဒီဇိုင်းနာများကဆင်ခြေကိုဝတ်ဆင်ပြီး ၀ တ်စုံအမျိုးမျိုးနှင့်ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ၀ တ်စုံဝတ်စုံသေးသေးလေးများသည်အမြဲတမ်းစီးရီးများထဲမှလူကြိုက်များသောအရာများဖြစ်သည်။ ဤစီးရီးများတွင်ယခင်ကထက် ပို၍ ပါဝင်သည် - Cactus Girl, Cowboy Costume Guy, Cat Costume Guy, Dragon Suit Guy, Elephant Girl …။
ဘယ်လိုမြင်သည် 75212 Kessel ထောင်စုနှစ် Falcon Run အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်သော်လည်း New York Toy Fair ၏တကယ့်မီးမောင်းထိုးပြမှုဖြစ်သည် Lego Star Wars 75208 Yoda's Hut ကိုကြည့်နေတာပေါ့။ ၎င်းသည် Dagobah Luke နှင့် R2-D2 တက်နေသည့်စက်များကဲ့သို့ကြီးမားသည်။ အနည်းငယ်ပါ ၀ င်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ၄၅၀၂ X-wing Fighter တွင်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဒါကတကယ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကောင်းတဲ့နည်းနည်းအားရစရာဖြစ်ပါတယ် classic အတွက် trilogy ပာ Star Wars လိုင်း, သောရေရှည်စုဆောင်းနှင့်အတူရေပန်းစားသက်သေပြသင့်ပါတယ်။
ပုံ - Toy Ark
New York Toy Fair မှသင်အကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်သင်မည်သည့်အရာများမျှော်လင့်နေသနည်း။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုအောက်ပါထင်မြင်ချက်များတွင်မျှဝေပါ Facebook က သို့မဟုတ်အပေါ် တွစ်တာ.
← Lego BOOST သဟဇာတ NINJAGO 70652 Stormbringer ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: အုတ်စိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့အနံ့ →